Cho Zin – မန်းလေး စားသောက်ဆိုင် နေရာလိပ်စာ လမ်းညွန် | MoeMaKa Burmese News & Media
on Thursday, 17 May 2012 at 18:09 ·
by ChoZin De Earthzprinzezz on Thursday, May 3, 2012 at 4:57pm ·
ခုနက အစားအသောက်ညွန်းပြီးတဲ့ နောက်မှာ မန်းလေးမှာ ရှိတဲ့ အထဲက ကျနော်သိသမျှဆိုင်လေးတွေကို ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်၊
မန်းလေးမုန့်တီမှာ နာမည်ကြီးတာကတော့ ၃၁ လမ်း ၈၄x၈၅ ကြားက စိုးစိုးမုန့်တီပင်၊ ရန်ကုန်က နာမည်ကြီးတွေ လာရင် လာစားကြရင်း နာမည်ကြီးတယ်ထင်တာပါပဲ၊ ကျနော်ကတော့ သိပ်မကြိုက် စိုးစိုးက အီသည် မုန့်တီဖတ်ကလဲ နည်းနည်း ချဉ် သည်၊
ဂေါဝိန်ဆိပ်နားက မုန့်တီကလည်းစားကောင်းတာပင်၊ ဒါပေမယ့် သူက မနက်နည်းနည်းနောက်ကျရင် ကုန်ပြီ၊
ဘုရားကြီးအာနန္ခာစောင်းတန်းက ကြီးတော်ခွေးကတော့ မုန့်တီမရောင်းတော့ဘူး ထင်ပါတယ်၊ တခါသွားတော့ ထမင်းပဲရောင်းတော့တယ် ဆိုလား…….
များသောအားဖြင့် ခိုတောင်မုန့်တီသည်တွေမှာ တရွာတည်းက ဖြစ်ကြသည်၊ မန်းလေး လမ်းမတွေပေါ်မှာ ညနေ ၂ နာရိမှ ၅ နာရီကြား လှည့်ရောင်းတတ်သည်၊
မနက်ဖက် စားချင်ရင်ဖြင့် ၈၁ လမ်း ၃၀x၃၁ကြား နေရှင်နယ် ကျောင်းရှေ့မှာ ၇ှိသည်၊ ( သူကလဲ နာမည်ကြီးဗျ… ဂျာနယ်ထဲတောင် ပါလိုက်သေး )
မန်းလေး မြီးရှည် တွင် နာမည်ကျော်ကတော့ ဗထူးကွင်းမြီးရှည်ပင်၊ ဒါပေမယ့် ကျနော်ကတော့ နည်းနည်းပေါ့လို့ မကြိုက်၊ ကျနော့်အကြိုက်က ရတနာပုံဈေး အရှေ့ဘက်က ဇော်ကြီးမြီးရှည်.. သူက ပိုပြီး လေးလေးပင်ပင်ရှိသည်၊
ပြီးတော့ ၃၃ လမ်းမှာ စိန်ဝင်းမြီးရှည်၊ လမ်းလည်ဘုရားနားက မြီးရည်ဆိုင် ၊ ၈၂ လမ်းက မန်ကျည်းရိပ်နှင့် ၁၉ လမ်း မြီးရှည်ကတော့ ၀က်အူတွေ ကလီစာတွေနှင့်ပါရနိုင်သည်၊ (ဒါပေမယ့် ၂ နာရီလောက်မှ ဖွင့်သည်)
ရှမ်းခေါက်ဆွဲဆိုင်တွေကတော့ ပေါလွန်းများလွန်းလှသဖြင့် နည်းနည်းပဲညွှန်းတော့မည်၊ ၇၄လမ်း ၃၄x၃၅ ကြားမှာ ရွှေမူဆယ်ရှိကာ အချိုအရသာ ကြိုက်သူတွေနှင့်သင့်တော်၏ ၊ သည်ဆိုင်တွင် ဆန်ချိုအေးလဲ ရသည်၊
ညဈေးတန်းမှ လားရှီုးဆိုင်တွင် ရှမ်းတို့ဟူးပျော့ ။ ၀က်ခြေထောက်ခေါက်ဆွဲကောင်းသည်၊
မန်းလေးတွင် ပုံစား ရှမ်းထမင်းဆိုင်များမှာ ကျောင်းသားကျောင်းသူများ ရုံးဝန်ထမ်းများအတွက်အားထားရာပင်၊ ပိုက်ဆံ ၈၀၀။ ၁၀၀၀ ဖြင့် ထမင်းတနပ်ကို ဟင်းသုံးမျိုး ဖြင့် စားနိုင်သည်၊
ရေစစ်ကန်နားက ၀င်းစံပါယ်ကတော့ ထမင်းမရပေမယ့် အခြား ရှမ်းအစားအစာ ငါးထမင်း ။ ဟင်းထုပ်။ ငါးဒုက္ခရသည်၊ ဆမ်ဆိုင်းမြီးရှည် ။ သဘောင်္သီးထောင်း စားကောင်းသည်။.
မြန်မာထမင်းစားချင်သူများအတွက် ၂၇ လမ်းတွင် တူးတူးရှိသည်၊ ( ဒါပေမယ့် တူးတူးက ၀က် ၊ အမဲမရ … ပြီးတော့ ဟင်းအမျိုး သိပ်မစုံ .. အရသာလည်း နည်းနည်း ပေါ့ပြီး အချိုကဲသလိုပင်) ၊ အေးမေတ္တာကတော့ ဟင်းပိုစုံသည် ( ၀က်သားဆိုလျှင်ပင် ၀က်သားနီချက် ။ အိုးကြီးချက်၊ ဟင်းလေးချက်။ ၀က်ပုန်းရည် ) အစုံရသည်၊
မန်းလေးမှာ ဒံပေါက်ဆိုရင် ၂၆ လမ်း ကျုံးဘေးမှာ ဒေါ်သန်းမူရှိပါတယ်၊ မြို့မရုံနဲ့ မျက်စောင်းထိုးမှာ သင်းရှိပါတယ်။
၈၃လမ်း ၂၈x၂၉ ကြားမှာ ပေါ်ပီ အဲလေ သင်္ဂဟ ဒံပေါက်ရှိပါတယ်။
ကေမီမွန်ဒံပေါက်စားချင်ရင်တော့ အလှူအိမ်သာ တွေ့အောင်လိုက်ရှာကြပါ။
ကျုံးမြောက်ဘက် ဂေါက်ကွင်းသွားတဲ့လမ်းမကြီးကနေ အနောက်ဘက်ကို ဖဲ့ဆင်းပြီုး မြောင်းလေးကို ကျော်လိုက်ရင် လမ်းဘေးမှာ ဒံပေါက်ဆိုင်လေး တဆိုင်ရှိပါတယ်။ မနက်အစောကြီးရောင်းတာပါ၊ ၈ နာရီလောက်ဆိုကုန်ပါပြီ။ ဒံပေါက် ။ ပဲထမင်း ။ အုန်းထမင်းရပါတယ်။ တပွဲမှ ၂၀၀ ရယ် ကြက်သားထည့်မှ ၇၀၀ …. စားလို့လဲကောင်းပါတယ်၊
အသုပ်စုံစားချင်လျှင် လမ်းပေါ်မှာလာတဲ့ ဈေးသည်ကို ထိုင်စောင့်လျှင်စောင့် မစောင့်နိုင်လျှင်တော့ ဈေးချိုထိ သွားရမှာပင် ၊ ဈေးချိုအနောက်ဘက် ကိုင်းတန်းဈေးထဲမှာ ဆိုင်ကြီးနှင့် အသုပ်စုံသည် တသည်ရှိသည်၊ ဈေးချိုတောင်ဘက်က အသည်ကတော့ တခါက ကျနော့်ကို တပွဲ ၁၅၀၀ ယူလွှတ်လိုက်သည်၊ ( ရက်စက်ပါပေ့ )
ကန်တော်ကြီးက မိုးကောင်းအသုပ်ဆိုင်ကတော့ ဆိတ်သားခြောက်သုပ် ကောင်းသည်၊ ချဉ်ချဉ်စပ်စပ်လေး ၊ တခြားအသုပ်တွေလဲ မဆိုးပါ . ဒါပေမယ့် သူက ထမင်းဆီဆမ်းဆိုလျှင် ဘာလချောင်ကြော်ပေးပြီး ထမင်းသုပ်မှာလျှင်ကြ မပေး၊ ( ကျနော်ကတော့ မရရအောင် ဇွတ်တောင်းတာပဲ )
ဆေးကျောင်းက လူတွေကတော့ စံအေးက လက်ဖက်သုပ် ရှောက်သီးသုပ်နှင့် အသက်ဆက်ကြတာများသည်၊
လမ်း ၈၀ လှကလေးစိန် ထိုးမုန့်ဆိုင်ရှေ့က ထမင်းသုပ်ကတော့ အမဲ အချင်း ၀မ်းတွင်းသားနှင့် ရသည်၊ စားကောင်းသည်း
၂၆လမ်း ကျုံးထိပ် Happy Palace နှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာ အရီးတောင်းဆိုင်ရှိသည်.။
၃၄လမ်း B.N ဗားမား မျက်နှာချင်းဆိုင်တွင် တွတ်ပီ ၀က်သားတုတ်ထိုးရှိသည်။ တုတ်ထိုးအပြင် ကြာဇံကြော် နှင့် ကော်ပြန့်လဲရသည်၊ သူ့ကော်ပြန့်က အထဲမှာ ၀က်သားအစာသွပ်ထားသဖြင့် အသားလိပ်လိုမျိုးဖြစ်ကာ စားကောင်းသည်၊ ဒါပေမယ့် ဟင်းရည်ကနည်းနည်းပေါ့သည်၊ ( တုတ်ကြီးကြားရင် ဓါးနဲ့လိုက်ခံရဥိးမယ် )
လမ်း ၃၀ ၆၉ ထောင့်မှာ တုတ်ထိုးတဆိုင်ရှိသည် သူလည်းမဆိုး၊ လမ်း ၇၀ ၃၂ထောင့် အာကာမင်း လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ရှေ့က တုတ်ထိုးကတော့ ကြံမဆိုင် ဟင်းရည်နှင့်ဖြစ်သည်၊ လမ်း၃၀ ၈၁x၈၂ကြား က ဆိုင်လဲ စားသူများသည်၊
ရတနာပုံဈေး KD ကြယ်သီးဆိုင်ရှေ့က ဆိုင်ကတော့ ဈေးမီးလောင်ပြီး ဘယ်ရွှေ့သွားလဲမသိ၊ သူ့ညီမတွေကတော့ ၁၄ ကျောင်းရှေ့မှာ ထွက်သည်၊
၁၆ ကျောင်းရှေ့က မြင့်လွင် လည်း နာမည် ကြီးသည်၊ ဒါပေမယ့် ဈေးကြီး သလိုပဲ၊
လမ်း ၈၀ ၃၈ လမ်းထောင့်က ကော်ပြန့်ကြော်ဆိုင်က အချဉ်ကောင်းသည်၊ ငါးဖယ်ကော်ပြန့် ၊ ငုံးဥကော်ပြန့်။ သီးစုံ ။ အာလူး အစုံရသည်၊
၆၉ လမ်း ၂၇လမ်းထောင့်က ဆိုင်ကတော့ ကော်ပြန့် အပြင် အကြော်စုံပါရသည်၊
IWTC ရှေ့က ကော်ပြန့်ကြော်က လည်း အတော်ကောင်းတယ်လို့ ကျနော့် အမတစ်ယောက်က ညွှန်းထားပါတယ်၊
လမ်း၈၀ လမ်း ၃၀ ဖူဂျီစတိုးဘေးက ဖက်ထုပ့်ကြော်ကစားကောင်းသည်၊ ဒါပေမယ့် ဆိုင်ရှင် တရုတ်မယားက ကပ်စီးနည်း .. အချဉ်တောင်းလျှင် ပေးချင်သလိုလို မပေးချင်သလိုလိုနဲ့၊
၃၂ လမ်း ၈၂ x ၈၃ ကြားမှာလည်း တဆိုင်ရှိသည်၊ ဗထူးကွင်းထောင့်က သားသတ်လွတ်ဖက်ထုပ်ကြော်ဆိုင်လေးကတော့ ရှိမှ ရှိသေးရဲ့လားမသိ၊ တပွဲမှ ၃၀၀ ရယ်၊
၃၇လမ်း စန္ခာမေနှင့် မျက်စောင်းထုိး Cafe House က ဖက်ထုပ်ကြော်ကတော့ တပွဲဆို တပွဲ အီဆောင့်နေတာပင်၊
ဖက်ထုပ်ပေါင်းကတော့ စနွာမေ ကိုပဲ ညွှန်းရမည်၊ ဖက်ထုပ်ပေါင်းအပြင် ဖက်ထုပ်ကြော်၊ ဆာတေး၊ အသားလိပ်ကြော် တွေလဲ ရသည်၊ ဒီတခေါက်သွားစားတော့ သိပ်မကောင်းတော့ ဖက်ထုပ်ပေါင်းကလဲ မာဂေါက်ဂေါက်… ဆာတေးကလဲ အချဉ်ရည်က ကျဲတဲတဲနဲ့
အာပူလျှာပူ တွင် ကျနော်တို့လက်စွဲက နန်းရှေ့ တရားရုံးချုပ်ရှေ့နေရုံးနားက အာပူလျှာပူဆိုင်ပင်၊ သူ့ဆိုင်က ပဲသီးများများနှင့် ငါးဖယ်သုပ် စပ်စပ်ကိုလဲ ကြိုက်ကြသည်၊
နောက်တဆိုင်ကတော့ အောင်တော်မူ ဘုရားနားက ရွှေအိ ထင်တယ် နာမည်က အာပူဆိုင်၊ ကယ်လီ church နားက အာပူလျှာပူဆိုင်ကတော့ တခြား ထမင်းသုပ် လက်ဖက်သုပ် ရှောက်သီးသုပ်တွေပါရသည်၊
မန်းလေးက လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဆိုသည်မှာ လက်ဖက်ရည် ကော်ဖီ. ပလာတာ ထပ်တရာ နံပြားကစလို့ မုန့်တီ မုန့်ဟင်းခါး မြီးရှည် မှသည် ထမင်းဆီဆမ်း . ထမင်းဟင်း အထိ အစုံရသည်၊
မန်းလေးတွင် အကြီးဆုံးလက်ဖက်ရည်ဆိုင် အုပ်စုမှာ မင်းသီဟ နှင့် ယူနီစံ ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ ရွှေပြည်မိုးကလဲ နေရာတကာ တွေ့လာရတာပင်၊. လမ်း၈၀မှ ၇၃ ကို ရွှေ့သွားသည့် ပါဝါ လက်ကီး ဆိုင်ကို အစက ကျနော်က ရှဝါ လက်ကီး ချည်းပဲ ဖတ်မိသည်၊.
aအောင်တော်မူဘုရားနားက cafe blue ကတော့ ညဘက်ဆို တော်တော်စည်သည်၊ ထူးထူးဆန်းဆန်း အဲ့သည်ဆိုင်မှာ ကျြွေမုန့် ရသည်၊( မုန့်ဗိုင်းတောင့်လို့လဲ ခေါ်တယ် ဗျ )
ဆေးကျောင်းနားက ဆိုလျှင်တော့ အချစ်ရွာ ရှိသည်၊3color ရှိသည်၊ ဆေးကျောင်းသက် ၇င့်သော ကျောင်းသားတချို့ ထိုင်တတ်သည့် မမေ့နိုင်ရှိသည်။ မမေ့နိုင်ကတော့ မိန်းကလေး ထိုင်တာတော်တော်နည်းသည်၊ဆေးကျောင်းတောင်ဘက် ဆိုင်ကယ် အပ်တဲ့ကွင်းထဲမှာတော့ Banyan Groove ရှိသည်၊
မိန်းဘက်ထဲဆိုလျှင် Friend ရှိသည် ။ ပန်းကမ္ဘာရှိသည်၊ Dynasty ကတော့ တော်တော်ချောင်ကျသော ဆိုင်ဖြစ်ပေမယ့် လက်ဖက်ရည်ကောင်းသလို ချက်ခုံ ကာတွန်းစာအုပ်တွေပါရှိလို့ လူစည်သည်၊
ညလုံးပေါက်ဖွင့်တဲ့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဆိုလျှင် ၃၅ လမ်းက ကီးမားတင်ဝင်း . ၃၅ လမ်း နှင့် ၂၆ လမ်းက ကရ၀ိတ်။ လမ်း ၃၀ အမျိုးသမီးဆေးရုံကြီးနားက ယူနီစံ။ ၇၄ လမ်း ၃၃ လမ်းထောင့်က လှိုင်းတို့ရှီသည်၊ ၈၃ လမ်းက မင်းမင်းကျော်ရှိသည်၊ မင်းမင်းကျော်က ထမင်းကြော်ကို ချဉ်ပေါင်ကြော်လေးနဲ့ ကောင်းသည်
လမ်း၈၀ ဖားသားလဖုန်းကျောင်းေ၇ှ့မှ ဖောင်တော်သီတွင် အအေးနှင့် သဘောင်္သီးထောင်း ကြက်ညှပ် ရသည်၊ အဲ့သည်ဆိုင်မှာ ကျနော်အကြိုက်ဆုံးက နို့အေးပါ၊
Breeze ကတော့ လမ်း၇၀ ၃၂x၃၃ ကြားတွင် ရှိပြီး ကောက်ညှင်းပေါင်းနှင့် အကြော်စုံပါရသည်၊
ဆေးကျောင်းတ၀ိုက်တွင်လည်း အအေးလှည်းလေးတွေ တော်တော်များသည်၊
ကျနော့် ကျောင်းတက်တုန်းက ကျနော်တို့ တဖွဲ့ရဲ့ ရုံးချုပ်က အချစ်ရွာရှေ့မှ ဦးလေးကြီးဆိုင်တွင် ဖြစ်သည်၊ ဦးလေးကြီးဆိုင်က ကော်ဖီအေးကတော့ ကျနော့် အသဲစွဲပင် တရက် ကို ၃ ခွက်လောက်သောက်ဖြစ်သည် ( star buck ထက်တောင်ကြိုက်သေးတယ် ) …. ပြီးတော့ ဦးလေးကြီးဆိုင်က ကျောင်းထဲ အ၀င်အထွက်ကော လမ်းမပေါ်ကော အချစ်ရွာထဲပါ မြင်ရလို့ အကွက်အကွင်းကောင်းသည်၊ ( အချင်းချင်းတွေဆိုတော့ ကပ်ကြော်ငြာပေးတာ )
ကော်ဖီဆိုင်များတွင် လမ်း ၈၀ ၂၅ ထောင့်က V Cafe က အရင်ကတော့ စားဖိုမှူးတော်တော်ကောင်းသည် .. အခုတော့ ပြောင်းသွားပြီလားမသိ ( အမဲသား ဘာဂါ တော်တော့်ကို ကောင်းသည် )
လမ်း ၈၀ မှာ နဂိုက ဖွင့်သည့် Cafe Jin က unplugged ၀ိုင်းလေးက အဆိုတော် ၂ ယောက်က တော်တော့်ကို အသံကောင်းသည်၊ အရင်က ညဘက်ဆို ကျနော်နှင့် ထက်ကြီး ၂ ယောက် ကော်ဖီတခွက်မှာပြီး သီချင်းသွားနားထောင်ကြသည်၊ အခုတော့ ဆိုင်ပိတ်သွားပြီ…
၂၇ လမ်း လမ်း ၇၀ ထောင့်က Koffee Korner ကတော့ ဒီနောက်ပိုင်း ထိုင်ဖြစ်သည်။ အဲ့သည်ဆိုင်မှာ ကျနော်တို့ အကြိုက်က Chicken Basket .. spaghetti bolognise နှင့် JD coffee ဖြစ်သည်။ ( ကိုသူရအောင် ဖျော်တဲ့ JD coffee က ပိုသောက်ကောင်းတယ်ဗျ )
ကတော့ ထိုင်လို့ နည်းနည်းကောင်းတဲ့ ဆိုင်ပဲ ညွှန်တော့မယ်၊
၇၃ လမ်း ၂၇ နှင့် ၂၈ မှာ ၀င်းဝင်းရှိသည်၊ သူက စည်ဘီယာမရ။ုပုလင်းပဲရသည် ဒါပေမယ့် ကျနော်က သူ့ဆိုင်က မာလာဟင်း ကြိုက်သည်၊
၆၁လမ်းမှာ M Bar ရှိသည်။ ပါတီ လုပ်ချင်သူများ အတွက်တော့ သင့်တော်သည်၊
ကန်တော်ကြီးမှာဆို ၀င်းဝင်းရှိသည်၊ ကျယ်ကျယ်လွင့်လွင့်သောက်ချင်လျှင် ကောင်းကောင်းရှိသည်၊၊ ဒဏ္စာရီ ရှိသည်၊
ဆခွံနှင့် ရှမ်းအရက်ကြိုက်တတ်လျှင် ၇တနာပုံဈေး အရှေ့ဘက်မှာ သျှမ်းသျှမ်းတောက် ရှိသည်၊
ဈေး တောင်ဘက်က 115 ကတော့ အ၇က်သမားဝါရင့်ကြိးတွေ ဆိုင်ထင်တာပဲ။ အဲ့ဒီဆိုင်က ဂျင်သောက်ကောင်းသည်၊
မန်းလေးတွင် အဓိက ထန်းရည်ရသည့် ၃ နေရာက အိမ်ရှေ့မင်းထန်းတော ။ ရန်ကင်းတောင် ထန်းတောနှင့် ဦးပိန်က ထန်းတောပင်၊
ဦးပိန်က ထန်းတောမှာ ထန်းရည်စစ်စစ် မရနိုင် ။ ဒါပေမယ့် ကြွက်ကြော်သုပ်ရသည်၊ ( ဒါကလဲ ရတနာပုံတက္ကသိုလ် ဘက်က ဆိုင်တွေ မှာပဲ ရတာနော် …. ဟိုဘက်က ဆိုင်တွေ မှာ မရဘူး ) ဆိတ်သားကို ငရုတ်သီး ကြက်သွန်ဖြူ ပင်စိမ်းရွက် နဲ့ ရောထောင်းပြီး ရှောက်သီးညှစ်ထားသည့် ဆိတ်သားထောင်း စပ်စပ် ။. ငါးကြော်။ ပြောင်းဖူးကြော် စားကောင်းသည်း
ရန်ကင်းတောင် ထန်းတောကလည်း ထန်းရည်အစစ် မရတော့။ ပြီးတော့ လူအရမ်းများလာသည်၊ တဲတွေ မှာ အမြဲတမ်းလူအပြည့် ။ တခါ အရင် ထန်းတော မရောက်ခင် မှာ ဆိုင်အသစ် တဆိုင် ထပ်ဖွင့်ထားသေးသည်း
ရေတံခွန်တောင်သွားသည့်လမ်းမှာလဲ ထန်းရည်ရပြီဆိုသည့် ဆိုင်းဘုတ်နှင့် ထန်းတဲလေး တခု ရှိသည်။ ဒါပေမယ့် သူက နည်းနည်း ညစ်ပတ်သည်၊
၇၁လမ်း ၂၇ လမ်းထောင့်က မူလတန်းကျောင်းဝင်းလေးထဲမှာ လည်း ထမင်းကြော်ဆိုင်တဆိုင်ရှိသည်။ သူက အသားကြော် အရံ မျိုးစုံနှင့်ရသည်၊
သူနှင့်မျက်စောင်းထိုးက အိမ်ဆိုင်လေးကတော့ ထမင်းကြော်တပွဲကို ခေါက်ဆွဲကြော်နဲ့လဲ စပ်လို့ရသည် ကြာဇံကြော်နဲ့လဲ စပ်လို့ရသည်၊
ညနေဘက်ဆိုလျှင်တော့ ၇၇လမ်းတောက်လျှောက်တွင် အာစင်နယ် ရွှေမန်းမေ အစရှိသော လှည်းတွေနှင့် ထမင်းကြော်ဆိုင်တွေရှိသည်၊ ကြက် ၀က် ဆိတ် ငါး အကြော်မျိုးစုံ နှင့် ထမင်းကြော်ကို ငံပြာရည်ဆီသတ် . ငပိထောင်း ၊ တို့စရာ၊ ချဉ်ရည်နှင့် မြိန်မြိန်ကြီးစားနိုင်သည်၊
မန်းလေးမှာ ကျနော်အကြိုက်ဆုံးကတော့ ရှိန်းဆီချက်ပင်။ ဒါပေမယ့် စားရတာ စိတ်မရှည် ။ အဲ့သည် ဘွားတော်က ဆီချက်လေး တမျှင်ကို ပန်းကန်ထဲထည့်လိုက် ပြန်ဖယ်လိုက် ပြန်ထည့်လိုက်နှင့် တော်တော်နဲ့ မပြီး။
ဒါကတော့ ဘယ်စာရင်းထဲ ထည့်လို့ ထည့်ရမှန်းမသိတဲ့ ဆိုင်တွေပင်
ဆုံနေကြ ကတော့ ၃၄လမ်း န၀ရတ်ရိပ်သာ မြောက်ဘက်အပေါက်က ဆိုင်လေးပင် ။ ဘာကောင်းလဲဆိုတော့ ဘာမှ မကောင်း။ ဒါလဲ ထိုင်ကြတာပါပဲ။ လက်ဖက်ထမင်းကို လက်ဖက်အသား ကြမ်းကြမ်းနှင့် ခပ်စပ်စပ်လေး ရသည်၊
၆၉လမ်း ၃၅ လမ်းထောင့်က တက်နေ၀င်းက ငါးသံပုရာကောင်းသည်။ အဲ့ဆိုင်နှင့် မျက်စောင်းထိုးလောက်တွင် ဂဏန်းချက် ဂဏန်းမဆလာကောင်းသည့်ဆိုင်ရှိသည်၊ စီချွမ်းဆိုလားပဲ နာမည် မမှတ်မိ၊
လမ်း၇၀ ၂၇လမ်းထောင့်က မူလတန်းကျောင်းပေါက်မှာ နေ့လည်ကျောင်းဆင်းချိန်ဆို ရှမ်းညီအစ်မ ၂ ယောက် တိုးဟူးသုပ်။ ရှမ်းခေါက်ဆွဲ ။ တို့ဟူးနွေးရောင်းသည်၊ သူတို့ဆိုင်က တို့ဟူးသုပ်က ရှမ်းလက်ရာ ချိုချဉ်စပ်လေး စားကောင်းသည်၊
၂၇လမ်း ၈၀x၈၁ ကြားက မတင့် ဖက်ထုပ်ပြုတ်ဆိုင်ကတော့ ညနေဘက်မှ ဖွင့်သည်၊
မန်းလေးမှာ ရေခဲမုန့် နာမည်ကြီးတာကတော့ ကုံးထက်ပါ… ကြက်ဆီထမင်းလဲ နာမည်ကြိးပါတယ်.. သူ့ရေခဲမုန့်က အုန်းသီးနံ့လေး နည်းနည်းသင်းပါတယ်…..
ဟိုရှေးကတည်းက နာမည်ကျော်တာကတော့ နိုင်လွန်ပါ. .. ခရီးသွားလမ်းညွှန်တွေထဲမှာထိပါတဲ့အတွက် နိုင်ငံခြားသားတွေ တကူးတက လာစား တတ်ပါတယ်….
ညဘက်မှ ရေခဲမုန့် စားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ၂၆လမ်း ၈၃ ထောင့်က အဇစ်က ရေခဲမုန့် ၊ မလိုင် ၊ ကူးဖီးလ် စပယ်ရှယ် လစ်ပါ
၇၆လမ်း ၂၇ x ၂၈ ကြားက ရွှေသုခကတော့ တခါတလေ ဆားပေါက်ပြီး ငန်လို့ ကျနော်က သိပ်မကြိုက်ပါဘူး
လမ်း ၈၀ ပေါ်က ရွှေနိုင်လွန်ကလည်း ရေခဲမုန့်သားမာပါတယ်
ရေခဲမုန့်ကို ကတော့လေးနဲ့ စက်ကညှစ်တဲ့ အခွေ အခွေလေး စားချင်ရင် ၀င်းလိုက်နဲ့ မြို့မရုံမှာရှိပါတယ်… တခါတလေ နှစ်ရောင်စပ်ရပါတယ်…….
၃၃ လမ်းက ပွိုင့်နေကြာစေ့ ဆိုင်မှာလဲ ရေခဲမုန့်ရပါတယ်………
မန်းလေး ပေါက်စီဆိုတာနဲ့ အားလုံး မန်းမြို့တော်ကို ပြေးမြင်ကြမှာပါ (နန္ခာလှိုင်တော့ မမြင်ကြနဲ့ပေါ့ဗျာ )
အဲ့လို ပေါက်စီမျိုးကို မစားချင်ပါဘူး ပါးပါးလွှာလွှာနဲ့ ခုနှစ်လွှာကိုမှ စားချင်ပါတယ်ဆိုသူတွေ အတွက် မြို့ဂုဏ်ေ၇ာင် ရုပ်ရှင်ရုံနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင် ၈၃ လမ်းပေါ်မှာ ရုံးစိန် ပေါက်စီ ဆိုင် ရှိပါတယ်။ သူက ပေါက်စီ တမျိုးတည်းပဲ သီးသန့်ရောင်းပြီး အလွန်ဆုံး မနက် ၈ နာရီ ၉ နာရီ အထိပဲ ရောင်းပါတယ်၊ ၃၃ လမ်း ၈၂ x ၈၃ ကြားက ရှမ်းခေါက်ဆွဲဆိုင်မှာလည်း ခုနှစ်လွှာနဲ့ ကြက်သား ကောက်ညှင်းထုပ် ရတတ်ပေမယ့် အခုတော့ ပိတ်သွားပီ ထင်ပါတယ်၊
ပေါက်စီ ပိစိကွေး သေးသေးလေးတွေ စားချင်တယ် ဆိုရင် တော့ ၆၄ လမ်း တရုတ်ကျောင်းရှေ့က မုန့်ဈေးတန်းမှာ ပေါက်စီဆိုင်ရှိပါတယ်၊
ဒါကတော့ ထပ်မံ အကြံပြုထားတဲ့ ဆိုင်တွေပါ……
Aung Khant Phyo ၏ အဖြည့်
နန်းရှေ့ ဈေးထဲက မနက်ပိုင်းမှဖွင့်တဲ့ အန်တီစန်းလွင်ရဲ့ မုန့် တီဆိုင်လေးကို ညွှန်းချင်ပါတယ်.. နံနက်အစောကြီး သုံးလေးနာရီလောက်ကတည်းက မင်းကွန်းဘက်ကမ်းရွာကနေပြီးတော့ မန္တလေးမြို့ အရှေ့ ပြင်လို့ ခေါ်တဲ့ နန်းရှေ့၁၉လမ်းဈေးထဲအထိ လာရောင်းတဲ့ အန်တီစန်းလွင်ရဲ့ လက်ရာကတော့ ဈေးနှုန်းချိုသာပေမယ့် လက်ရာကတော့ ညီမချိုကြီးပြောခဲ့တဲ့ဆိုင်လက်ရာတွေထက် မသာရင်နေမယ် မလျော့ပါဘူး မန္တလေးကိုချစ်တဲ့ အန်တီစန်းလွင်ကတော့ မိုးရွာရွာ နေပူပူ နန်းရှေ့ လက်လုပ်လက်စားများအတွက် နံနက်စာ အားဖြည့်ပေးနေသူတစ်ယောက်မို့ လို ကျွန်တော်ကတော့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရရော လက်ရာအနေနဲ့ ရော ချစ်လို့ အမြဲသွားအားပေးမိပါတယ်…ကဲ နန်းကြီးနဲ့ မုန့်တီဘာကွာလို့ လဲကွ လို့ မေးချင်သူတွေ သွားပြီးအားပေးသင့်ပါတယ်….
Wunna Zaw ၏ အဖြည့်
မုန့်တီဆိုရင် ၈၉လမ်း ပြည်ကျော်ဈေးနားက ဒေါ်လှကျော့ မုန့်တီလည်း ကောင်းသဗျ၊ စိုးစိုးမုန့်တီလို ဟန်တွေပန်တွေမများဘူး ဆိုင်အပြင်အဆင်လဲမရှိဘူး အရသာတော့အတော်ကောင်းတယ်။ သူ့ဆိုင်မှာ ညနေဘက်ရောင်းတဲ့ အကြော်စုံလည်းကောင်းတယ်ဗျ..။ ၃၈လမ်း ၈၂-၈၃ကြားမှာလဲတဆိုင်ကောင်းတာရှိသေးတယ်။ ၂၆လမ်း နဲ့ ကမ်းနားလမ်းထောင့်နားက မုန့်တီဆိုင်ကတော့ အမဲအကြောနဲ့သုပ်တာ နာမည်ကြီးတယ်..။
ခိုတောင်မုန့်တီကတော့ ခုနောက်ပိုင်း ကြုံသလို အိမ်ရှေ့လာတဲ့ အသည်မှာပဲဝယ်စားတာများတယ်။ ငယ်ငယ်ကစားဖူးတဲ့ ဈေးချို ၂၈လမ်း သံဖြူတန်းမှာ အဖွားကြီးတယောက်ရောင်းတဲ့ ခိုတောင်လောက်တော့ ဘယ်ဟာမှမမှီဘူး..။ခုတော့လဲ အဲ့ဒီအမေကြီးမရှိရှာလောက်တော့ဘူး..။
မြီးရှည်ဆိုရင်တော့ ၁၆လမ်းကမြီးရှည်ကိုအကြိုက်ဆုံးပဲ ၀က်ကလီစာအစုံပါတဲ့အပြင် သူ့ဆိုင်မှာပဲရှိတဲ့ ၀က်သားစုံကို ဒညင်းသီးနဲ့သုပ်တဲ့ အသုပ်ကတော့ မပါမဖြစ်ပဲ။ သူ့ဆိုင်က မနက်စာအနေနဲ့စားလို့မရဘူး ၁၁နာရီလောက်မှဖွင့်တယ်။ ၈၂လမ်းမကျည်းရိပ်က စားလို့တော့မဆိုးပါဘူး ဒါပေမဲ့ နည်းနည်း ညစ်ပတ်သလားလို့..။ ဗထူးကွင်းမြီးရှည်တို့ ၃၄ x ၈၄ ထောင့်က စိန်မြင့်မြီးရှည်တို့လည်း ကောင်းကြပါတယ်..။
ရှမ်းခေါက်ဆွဲကတော့ မန်းလေးမှာ လက်ညိုးထိုးမလွဲလောက်နီးနီး ပေါတယ်..။ သူဟာနဲ့သူတော့ စားလို့ အဆင်ပြေတာချည်းပါပဲ..။
ဆီချက်ခေါက်ဆွဲဆိုရင်တော့ လမ်း၈၀ ဒေါ်ရွှေက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ overdose ဖြစ်ခဲ့တဲ့ညတွေအတွက် မနက်တိုင်းပြေးရတဲ့ ဖြေဆေးပေါ့ဗျာ..။ သူဆိုင်က ကြက်ပေါင်းနဲ့ ဆီချက်ခေါက်ဆွဲလေး ဆွဲလိုက်ရင် ညကများခဲ့သမျှ အေးဆေးပြန်ဖြစ်သွားရော..။ ညနေဆို၇င်တော့ ၃၂ x ၈၄ ထောင့်က လှည်းကြီးနဲ့ရောင်းတဲ့ အောင်သိန်းမှာ ဆန်ပြားဆီချက်သွားစားဗျာ..။ ၇၉လမ်း ၃၃-၃၄ကြား နမ့်ခမ်းက အမဲကြော/လုံး ဆီချက်လမ်းမိုက်တယ်..၊ အဲ့ဒီဆိုင်မှာ အမဲကြော်ကိုမွှပြီး ငရုပ်သီးစိမ်းနဲ့ကြက်သွန်ဖြူထောင်းထားတာကိုဖြူး ဆီလေးဆမ်း သံပရာရည်ချဉ်ချဉ်လေးနဲ့ သုပ်ပေးတာလဲလွှတ်ကောင်းတယ်..။
ချစ်တီးထမင်းက ၈၁လမ်းက ပန်းချယ်ရီမှာကောင်းသဗျ။
မနက်စောစောစာဆိုရင် ထမင်းဆီဆမ်း၊ အုန်းထမင်း၊ ဆီထမင်း နဲ့ ဒံပေါက်တွေကို ဆိတ်သားကြော်ကြွပ်ကြွပ်လေးနဲ့တွဲရောင်းတဲ့ ၃၃x၈၄ ထောင့်ကဆိုင်ရှိတယ်။ မင်းသီဟတို့ ရွှေပြည်မိုးတို့ တော့(ပ)ချိုက်(စ)တို့သွားရင်တော့ အစုံရတာပေါ့ စားလိုလဲကောင်းပါ့..။ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထဲမှာ ဆိုင်လို့ကောင်းတာကလွဲရင် ကျန်တာ မကောင်းတာက မိန်းနားက Friend (လှညွန့်တွေ့ရင် ငါကိုဆဲလိမ့်မယ်.. :D). လူစုလို့ ထိုင်လို့ကောင်းတယ် အစားအသောက်လည်း ဒီလောက်မကောင်းဘူး ညစ်လည်ညစ်ပတ်တယ်:D..(လှညွန့်ရေ ဆောရီး..)../
ခုတော့ သတိရသမျှ အာသီသရှိသမျှ ရေးလိုက်တယ်
Myo Htet Zaw · 36 mutual friends
၃၁လမ်း ၇၁၊ ၇၂ ကြားက ရွှေရောင်လင်းဆိုတဲ့ မြန်မာအစားအစာ နံနက်စာဆိုင် လဲ ကောင်းတယ် ။ ဥပုဒ်နေ့ နဲ့ ဆန်းဒေးဆို ကြက်သားခနုံ ရတယ် ။ဒိန်ချဉ်ဆို 76ညဈေးတန်းက ရွှေသတ္တိနို့ပါတီလဲ ကောင်းတယ် ။ ထန်းလျက်နဲ့ ရတယ် ။ 34လမ်း 73 /74 ကြားထဲက ရွှေအိုးလဲ ကောင်းတယ် ။
Aung Ko Ko Han မြန်မာဟင်းနဲ့ပါတ်သက်ရင် မိန်းပေါက်နားလေးမှာ မိသာစုထမင်းဆိုင်ရှိသေးတယ်
နောက် အေးမေတ္တာလည်း မဆိုးပါဘူး
မချိုကြီး …. ကြေးအိုးဆိုင်မပါဘူး … ကြေးအိုးမှာ ၇၄လမ်းပေါ်မှာ အရုဏ်ဦး ကြေးအိုးရှိတယ် အရမ်းကောင်းတယ် … စန္ဒာမေ ဖက်ထုပ်ပေါင်းဆိုင်မှာလည်း ကြေးအိုးရပေမဲ့ ကျွန်တော်တော့ လုံးဝမကြိုက်ပါ … ပွစိစိကြီး ဖြစ်နေသလိုပဲ … နောက်တစ်ဆိုင်ကတော့ နန်း…ရှေ့ က Cafe Queen မှာ ဈေးကြီးကြီးနဲ့ ကြေးအိုးကောင်းကောင်းရတယ် … အများကြီးလည်းပါတယ် တစ်ယောက်တည်း စားလို့သိပ်မကုန်တတ်ဘူး ..ရွှေတောင်တန်းကတော့ အရင်ကလည်း နာမည်ကြီး အခုလည်းနာမည်ကြီးပဲ .. တခြားတခြားသော ကြေးအိုးဆိုင်တွေလည်း အများကြီးရှိပါသေးတယ် ကျွန်တော်တော့ ဒီလောက်ပဲ သိပါတယ် 😛
( ကဲ…. စဉ်းစားလို့ မရတော့ဘူး … ကိုယ်ကောင်းတာ သိတဲ့ဆိုင်ရှိရင်လည်း ဖြည့်စွက်ပေးကြပါ )
One Response to Cho Zin – မန်းလေး စားသောက်ဆိုင် နေရာလိပ်စာ လမ်းညွန်
Khin Moe on May 21, 2012 at 11:58 am
ChoZin, I see how you love Mandalay. Now I know why people proud of Mandalay. I have never been to Mandalay. But I always interest your city. I could see your goodwill for us. Thank you very much for your helpful list and address. I could see your knowledge and experiences. I really want to vist Mandaly ASAP. I really would like to eat everything which your friends and you recomanded food. It is very interesting. I always read news, articles which related to politic and other unhappy stories. I think we should read happy and light articles like your list of Mandalar food. It make me happy. Keep going! Your writing is very nice. I am sure I will dream your food tonight.